वडा कार्यालयमै यौ न स-म्पर्क गर्दागर्दै वडा अध्यक्ष प क्राउ – AB Sansar
वडा कार्यालयमै यौ न स-म्पर्क गर्दागर्दै वडा अध्यक्ष प क्राउ
December 11, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on वडा कार्यालयमै यौ न स-म्पर्क गर्दागर्दै वडा अध्यक्ष प क्राउ
सल्यान । वडा कार्यालयमै यौ’Nनजन्य क्रियाकलाप गर्दैगर्दा वडा अध्यक्ष भेटिएपछि त्रिवेणी गाउँपालिका–४ का स्थानीयले आ’ न्दोलन थालेका छन् ।
वडाध्यक्ष छविलाल शर्मा वडा कार्यालयमै पर’स्त्रसँग यौ’न क्रियाकलाप गर्दैगर्दा भेटिएपछि उनीहरूले का’. र्वाहीको माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । श्रीमान विदेश रहेका ती महि’लासँग लामो समयदेखि अवैध सम्बन्ध राख्दै आएका वडाध्यक्ष शर्माले राति घरबाट मोटरसाइकलमा राखेर लगेपछि स्थानीयले पिच्छा गरेका थिए ।
वडाध्यक्षले महिलालाई वडा कार्यालयमा लगेपछी स्थानीयले दुवैजना बसेको कोठामा बाहिरबाट चु…uक्कुल लगाएर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । कार्यालयमा यौ`न क्रियाकलाप गरेको भन्दा स्थानीयले आन्दोलन थालेपछि प्रहरीले मु. Eद्दा अघि बढाएको छ ।
रा: तको एक बजे महिलासहित इलाका प्रहरी कार्यालय लुहाम पुर्याइएका उनीमाथि वडा कार्यालयमै यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको भन्दै मुद्दा अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी डीएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले बताए । घटnnनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्गा माताले सबैको रक्षा गरुन, मंसिर २७ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बोलेकै भरमा राज्यविरूद्धको कसुर लगाउने हो भने त लाखौं नेपालीलाई पक्रनु पर्छ – कानुनविद्